Isuduwe: 34°N 9°E﻿ / ﻿34°N 9°E
Kani waa maqaal ku saabsan qaarada Afrika. Maqaalo kale eeg wadanada Afrika
Boga "Africa" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Qarnigii 19aad ayaa wadamada reer Yurub go'aan ku gaadhay gumeysashada Afrika. Dawladda kaliya ee xor ahaa waqtiga halgankaas waa dawladda Darwiish ee abaanduulkii guud ka ahaa Ismaaciil Mire, iyo Qusuusi kale waliba u talin jirtey.
Taariikhda Berber waa taariikhda beeraha ee dhaqan ahaan loo isticmaalo Berbers. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'fellaḥi' (فلاحي "rustic" ama cinwaanka 'ajamī' kalandarka 'ajnabiga'). Kalandarka waxaa loo adeegsadaa si loo xakameeyo shaqooyinka beeraha xilliyeed.
Kalandarka Islaamiga ah, kalandarka miridhku waxa loo tixgeliyaa qaar ka mid ah kuwa jiran oo aan u habbooneyn beeraha, sababtoo ah waxay la xiriiraan wareegyada xilliyeed. 
Kalandarka Berber-ka hadda waa dhaxal ka mid ah gobolka Roomaaniya ee Mauretania Caesariensis iyo gobolka Roomaaniya, maxaa yeelay waa qaab nololeed oo ah taariikhda Julian. Kalandarka dambe waxaa loo adeegsaday Yurub ka hor inta aan la ansixin jadwalka Gregorian, oo leh magacyada bilaha laga soo qaaday Laatiin. Dadka reer Berber waxay horay u adeegsan jireen kalendooyin kala duwan, sida kuwa Guanche Autochthones ee Canary Islands. Si kastaba ha ahaatee, waxoogaa yar ayaa loo yaqaanaa nidaamyadan qadiimiga ah.
Dadka Berberiga ama Dadka Amazighiga waa shacab dagan wadamada waqooyiga Afrika waxa ay kukala baahsanyihiin lagabilaabo magaalda Siwa ee wadnkamasar ilaa Badweynta Atlaantik dhanka kale Bada Dhexe ilaa Wabiga NiJer badanaa barbarku waxa ay isku magacaabaan (Tamazight.) waxaanay shacabkani ku hadlaan Luqadaha Berberiga
Jaamacada Carabta waa urur kulmiya wadamada carabta.Waa urur kulmiya wadamo kuyaala Afrika iyo Aasiya xubnaha kujira waxaa looyaqaana dawldo caraba.waa dawlado wadaaga arimo dhaqaale iyo arimo siyaasadeed. waxaana ka dhexeeya xidhiidho aad iyo aad ubadan
Wadamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta waxay daboolayaan in ka badan 13,000,000 km2 (5,000,000 sq m) iyo waliba laba qaaradood oo kala duwan: Afrika iyo Aasiya. Goobtaasi waxay ka kooban tahay lamadegalka duurka, sida Sahara. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale ku jira dhulal badan oo aad u sarreeya sida Dooxada Nile, Dooxada Jubba iyo Dooxada Shebelle ee Geeska Afrika, Buuraleyda Atlas ee Maghreb, iyo Bariiska Fertile ee sii fidiya Mesopotamia iyo Levant. Aagga ayaa ka kooban kaymo qoto dheer oo ku yaal koonfurta Carabta iyo qaybo ka mid ah webiga ugu dheer dunida, Niil.
Jaartarka Jaamacadda Carabta, oo sidoo kale loo yaqaano Heshiiska Jaamacadda Carabta, ayaa ah heshiiskii aasaasay ee Jaamacadda Carabta. 1945-kii la aqbalay, waxa uu dhigayaa in "Ururka Jaamacadda Carabtu uu ka kooban yahay Dawladaha Carbeed ee madaxbannaan oo saxiixay Heshiiskan." 
Markii hore, 1945, waxaa jiray lix xubnood oo keliya. Maanta, Jaamacadda Carabta waxay leedahay 22 xubnood, oo ay ka mid yihiin saddex dal oo Afrikaan ah oo ka kala yimi qaybaha ugu waaweyn (Sudan, Algeria iyo Liibiya) iyo waddanka ugu weyn ee Bariga Dhexe (Sacuudi Carabiya).
Shan waddan waxay leeyihiin xaalad kormeeree oo xaq u siinaya inay muujiyaan ra'yigooda oo ay bixiyaan talo laakiin waxay diidaan xuquuqda codbixinta.
Jaamacadda Carabtu waxay u qaybsantaa shan qaybood marka ay timaado gaadiidka, jasiiradda Carabta iyo Bariga dhow ayaa si buuxda ugu xiran hawada, badda, waddooyinka iyo tareenada. Qeyb kale oo ka mid ah League waa dooxada Niil, oo ka kooban Masar iyo Suudaan. Labadan dawladood waxay bilaabeen inay hagaajiyaan nidaamka Nile Nile ee habka safarka si loo wanaajiyo helitaanka iyo sida ganacsi loo korsado. Nidaamka tareenada cusub ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu ku xiro magaalada koonfurta Masar ee Abu Simbel iyo waqooyiga Suudaan ee Wadi Halfa iyo ka dibna Khartoum iyo Port Sudan. Qaybta saddexaad ee horyaalka waa Maghreb, halkaas oo 3,000 km oo gawaarida gawaarida ah ay ka socdaan magaalooyinka koonfurta ee Morocco ilaa Tripoli oo ku yaala galbeedka Libya. Qaybta afaraad ee horyaalka waa Geeska Afrika, oo wadamada xubnaha ka ah ay ka mid yihiin Jabuuti iyo Soomaaliya. Labadan dawladood ee Carabta ayaa kala qaybiyay kaliya toban mayl u jirta jasiiradda Carabta ee Bab el Mandeb, taasina si dhakhso ah ayay isu bedeshaa, sida Tarik bin Laden, oo ah walaalkii Osama bin Laden, oo bilaabay dhisidda mashruuc ballaadhan ee mashruuca Horn Horns , kaas oo ugu dambeyntii ujeedkiisu yahay inuu ku xiro Geeska Afrika oo leh Jasiiradda Carabta adoo adeegsanaya buundo weyn. Mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu fududeeyo oo la dedejiyo ganacsiga iyo ganacsiga qarniyadii hore ee u dhexeeyay labada gobol. Qaybta ugu dambeysa ee horyaalka waa jasiiradda go'doomin ee Comoros, taas oo aan ku xirnayn dawlad kale oo Carbeed ah, laakiin wali waxay la shaqaysaa xubnaha kale ee League.
Jaamacadda Carabtu waxay hodan ku tahay khayraadka, sida saliid weyn iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalalka xubnaha ka ah. Warshad kale oo si joogta ah u sii kordhaysa ee Jaamacadda Carabtu waa isgaarsiin. Muddo ka yar 10 sano, shirkadaha maxaliga ah sida Orascom iyo Etisalat waxay ku guuleysteen inay tartan caalami ah sameeyaan.
Horumarka dhaqaale ee ay bilowday Ururka Iskaashatada Wadamada xubnaha ka ah ayaa ka qosol badan kuwii ka soo baxay ururada yar yar ee Carabta sida Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC).  Waxaa ka mid ah Pipeline Arab Pipeline, kaas oo gaas Masar iyo Ciraaq geyn doona Jordan, Syria, Lubnaan, iyo Turkiga. Laga soo bilaabo 2013, isbeddel muuqda oo ka dhexeeya xaaladaha dhaqaale ayaa ka dhexeeya dalalka saliida ee saliida ee Algeria, Qatar, Kuwait iyo UAE, iyo dalalka soo koraya sida Comoros, Jabuuti, Mauritania, Soomaaliya, Sudan iyo Yemen.
Ururka Jaamacadda Carabtu waa urur siyaasadeed oo isku daya in uu gacan ka geysto sidii loo xoojin lahaa xubnaheeda dhaqaale ahaan, iyo xallinta khilaafaadka ku lug leh dalalka xubnaha ka ah adoon weydiisan kaalmo shisheeye. Waxay leedahay lahjado xubin baarlamaan ah oo wakiil ka ah arrimaha arrimaha dibedda sida badan waxaa lagu maareyn doonaa kormeerka QM.
Jaangooyada Jaamacadda Carabta  waxay taageertay mabda'a dhulkii Carabta iyada oo la ixtiraamayo xushmadnimada dawladaha xubnaha ka ah. Xeerarka gudaha ee Golaha Jaamacadda  iyo guddiyada  waxay ku heshiiyeen Oktoobar 1951. Xoghaynta Guud waxaa lagu heshiiyay May 1953. 
Tan iyo markaas, maamulka Jaamacadda Carabtu waxay ku saleysnaayeen labadii hay'adood ee heer qaran iyo madax-bannaanida wadamada xubnaha ka ah. Ilaalinta dawladnimada shakhsi ahaaneed waxay ka heshay awoodeeda ka soo jeeda dabiiciga dabiiciga ah ee awooda xukunka ah si ay u ilaaliyaan awooddooda iyo madax-bannaanida go'aaminta. Intaa waxaa dheer, cabsida hodanka ah ee saboolka ah ee saboolka ah inuu la wadaagi karo hantidiisa magaca Ummadda Carabta, khilaafyada ka dhexeeya madaxda Carabta, iyo saamaynta awoodaha dibadda ee laga yaabo inay ka soo horjeedaan midnimada Carabta ayaa loo arki karaa caqabado dhinaca isdhexgalka qoto dheer ee horyaal .
) as the personification of Alexandria, with her crown showing a ship's prow, while she sports an anchor-shaped brooch for her robes, symbols of the Ptolemaic Empire]]'s naval prowess and successes in the Mediterranean Sea.]]
Kani waa maqaal ku saabsan "Lamadegaanka Saxara" ee waqooyiga Afrika. Bogag kale fiiri Lamadegaan iyo Lamadegaanka Kalahari.
Maqaalka Saxara iyo Sahara waxaa laga soo toosiyay halkan.
Lambedusa afka taliyaaniga (Isola di Lampedusa) waa jasiirad ku taala ama kamida wadanka Talyaaniga waa jasiirad aad uyar waxa ay masaafo ahaan tahay 21 klm oo isku wareeg ah waxaa kunool dad gaadhaya 5000 oo qof 170 klm ayay dhanka galbeed ka xigataa jasiirada Sasiiliya maamul ahaana waxay ka tirsantahay w2adanka taliyaaniga waxa kutaalaa badhtama Bada Dhexe waxa ay bada kasaraysaa 133 mtr.
Liiska Safiirada dadka ku Tunisiya
TunisiaLiiska Safiirada dadka ku Tunisiya
United States: Daniel Rubinstein Un Tiroka 840
United Kingdom Louise De Sousa Un Tiroka 826
United Arab Emirates Salem Zeabi Un Tiroka 784
China Wang Wenbin Un Tiroka 156
Somalia - Un Tiroka 706
Ethiopia - Un Tiroka 231
Kenya - Un Tiroka 408
Yemen- Un Tiroka 887
Japan-Un Tiroka 392
Liska Safiirada dadka ku Dalalka
Liiska Safiirada dadka ku Nayjeeriya
Liiska Safiirada dadka ku Soomaaliya
Liiska Safiirada dadka ku Masar
Liiska Safiirada dadka ku Australia
Liska Safiirada dadka ku Turkiga
Liiska Safiirada dadka ku UAE
Liska Safiirada dadka ku Jabuuti
Liiska Safiirada dadka ku Iraq
Liiska Safiirada dadka ku Talyaaniga
Liska Safiirada dadka ku Indonesia
Liiska Safiirada dadka ku peru
Liiska Safiirada dadka ku Sudan
Liiska Safiirada dadka ku Jabaan
Liiska Safiirada dadka ku USA
Liska Safiirada dadka ku UK
Maqrib (Af-Carabi: المغرب العربي) ama Galbeed waxaa loo yaqaan gobol ku yaalla galbeedka afrika oo kulmiya shan wadan oo kala ah moritaaniya, aljeeriya marooko, tuniisiya iyo liibiya. baaxada dhulkaas ayaa dhan 5.782.140 oo kilo mitir iskuweer.
Malta ama jamhuuriyadda Malta loona jaqaano (jasiirada malta). waa Wadan jasiirado ka kooban oo ku yaalo Badda Dhexe ee Yurub. malta waa mid kamida wadamada ugu yaryar qaarada yurub malta waxa ay kakoobantahay sadex jasiiradood oo aad u yaryar
Tunis (Af-Carabi: تونس) waa caasimada iyo magaalada ugu weyn wadanka Tunisiya ee Waqooyiga Afrika.
Caasimadani waxaa ku dhaqan dad tiradeeda lagu sheegay 2,700,000 qof waxayna dhinaca ku haysaa Bada Midatareeniyanka.
Tunis waa caasimada dalka Tunisiya.